Ochwepheshe beBrithani enkulu, lapho bewela umsizi kanye ne-Old English Bulldog, bathola i-Bullmastiff yohlobo olusemthethweni. Le nja ivame ukubizwa ngokuthi "inkosi yamahlathi", njengoba ihlangana kahle nensizakalo emahlathini ukuze kusetshenziswe nokuqedwa kwabazingeli. Le nja enkulu, enzima ingakwazi ukubhekana nabantu abahlomile.
Izinja zizala uBullmastiff ukulinganisela okulinganiselayo nokungapheleli, bakhetha ukuzithela futhi bezithele isikhathi sabo endaweni yabo. Ngenxa yobumnene bakhe bendabuko, uBullmastiff uzizwa kahle efulethini lomuzi. Le nja inomusa omuhle, isimo sengqondo esiqotho kubantwana, inomusa kubo bonke abakhileyo endlini, ixazulula ukuzikhethela, iyasebenza emidlalweni nasekuzijabuliseni okuhlangene. I-Bullmastiff ingumngane omuhle nomlondolozi womzimba, nakuba kungafani nokuhlukunyezwa.
I-Bullmastiff iyinja enkulu, ukuphakama kwayo ekugcineni kubonakala cishe ngo-70 cm. Ukubukeka kwangaphandle okwesabekayo akuhambisani nomlingisi wayo olinganiselayo futhi onomusa. Kuyinto inja yobukhosi enokuziphatha kwangaphandle okuhle. Le nja isola abantu abangabazi, kodwa akekho owokuqala ongayi empini futhi angeke avuse ukulwa.
Kumuntu le nja uthola imizwa yomusa kuphela. I-Bullmastiff ine-intelligence ephezulu, ibonakala ngisho nokubukeka kwayo okunenjongo. Amandla kanye nokuhlakanipha kwezinkunzi zezinkunzi zizalwa ngokubeletha, zihanjiswa yizinzalo, kodwa noma kunjalo kubalulekile ukuzifundisa. Ukuqapha okukhethekile kufanele kunikezwe ekuqeqesheni, ngoba le nja ingowabalindi ngakho-ke idinga ukusekelwa lezi zimfanelo. Izinja zalolu hlobo ziyi-brave ngokungavamile, amahloni ukuphambuka kusuka kwisilinganiso esimisiwe.
I-Bullmastiff iyi-phlegmatic. Izinja zalesi sizwe zibhekwa ngokuzethemba, ukwethembeka, ukwethembeka, isibindi nokubekezela. UBullmastiff ungumlingani omuhle kakhulu nomngane wakhe, ngisho nasemindenini lapho izingane ezincane zikhona. Le nja iyakuthanda izingane kakhulu futhi ivumela ukuba isetshenziswe njengenja "ekhohlisiwe". Ngenjabulo uyadlala futhi uhlanganyele emsebenzini osebenzayo, naphezu ubuvila bakhe bemvelo.
Uma i-bullmastiff ivela emndenini, iba yingxenye ebalulekile yayo, ifakwe ngokuqinile kubo bonke abakhileyo endlini futhi ithatha umthwalo wokuvikelwa okulindile ekhaya. UBullmastiff uyakuthanda kakhulu, lapho umndeni useqoqweni eligcwele, lokhu kumnika ithuba lokubonisa imisebenzi ephakeme yokuzivikela. Lo ngumngane othembekile wenkosi yakhe futhi ucabangela ngokucophelela isimo sakhe sengqondo. Uma isimo soguquko sishintsha, i-bullmastiff izwa sengathi iziphatha. Ezimweni ezihlukene, inja ingabonisa ukuzimela ngaphandle kokuthola iqembu.
I-Bullmastiff ihlukaniswe ngokuthula kwayo futhi ngeke ihlasele ize. Ezimweni ezimbi kakhulu, uzibonakalisa engumuntu olwa nesibindi. I-Bullmastiff ayalokothi ihlasele futhi ingabangeli ukuxabana noma ukulwa. Ubungcweti yikhwalithi ehambisanayo yenja yalolu hlobo.
Ezimweni noma ezinsongweni ekuphepheni kokuphila nokuthula komnikazi noma umndeni wakhe, i-bullmastiff ibonakale njengomvikeli ongenesibindi nomlindi. Inja ibonisa ukusabela okusheshayo, kodwa i-bullmastiff ayikhombisi igazi futhi ngeke ihambe ngaphezu kwemingcele yalokho okuvunyelwe, umgomo wayo ukuqeda isimo sokungqubuzana futhi unikeze ukuphepha okuphezulu kubanikazi bayo. Inja ayizami ukulimaza umhlaseli. Ngemuva kokuphela kwesimo esisongelayo, i-Bulmastiff iba ngumngane ofanayo odlala futhi olinganiselayo.
Ukubekezela kwezinja zezinja ze-bullmastiff kubonakala kukho konke. Inja ivumela abanikazi bayo konke. Ngisho nangokwelashwa, uyoba yisiguli esilalelayo. UBullmastiff akazami ukuba ngumholi, uphatha wonke amalungu omndeni ngendlela efanayo.
Izinja ze-Bullmastiff zivuthiwe ngasekupheleni kokubili kwengqondo nangokomzimba. Ukuvuthwa kokugcina kwenzeka ngonyaka wesithathu wokuphila.
Le nja iyadingeka, njengokunye, ukuqeqeshwa. Ngenxa yobuhlakani bayo bemvelo, i-bullmastiff iyazi kahle ukubaluleka kwamaqembu, kodwa ukubulawa kwala maqembu kuthatha isikhathi esiningi kunabanye.
I-Bullmastiff ingahlala ngisho nasendlini encane yedolobha. Kungcono ukuba abe ekhoneni lakhe, lapho echitha khona isikhathi sakhe esiningi, engaphazamisi izakhamuzi zendlu. I-Bullmastiff ayithathi hlangothi noma enhle mayelana nezilwane ezifuywayo ezihlala nayo endaweni. Lezi zinja ziphila cishe eminyakeni eyi-10-12.
I-Bullmastiff ayibekezelelisi imitheshonqubo yokushisa ephezulu, okungukuthi, izwa kabi ekushiseni nasezingeni lokushisa elibandayo kakhulu. Izinja zalolu hlobo zithandwa kakhulu, ngakho-ke zidinga ukuhamba kwansuku zonke, lapho zivunyelwe ukudlala futhi zigijime kakhulu. Uma uqeqesha nokuhamba, awukwazi ukuphoqa inja ukuthatha izithiyo eziphakeme noma ukuzuma kusuka ekuphakameni. Isisindo, i-bullmastiff inkulu futhi ukujuluka okunjalo kungabangela ukulimala okuhlukahlukene, njengokuhlukana kwemigqa kanye nokwelula kwamathenda, kanye nokwehlukana.
Ukubonakala ku-Bullmastiff kumnandi kakhulu. Ukuqeda inja akudingeki. Ukunakekelwa kuhlanganisa ukusika izikhonkwane ezihlelekile nokuhlunga ama-crystal nge-brush ye-raber. Ukugeza kungenziwa njengokudingekile ngokusebenzisa izindlela ezihlosiwe.
Inja ayinayo imfucumfucu ngokweqile - lokhu kuyi-bullmastiff yekhwalithi enhle, ngenkathi uyigcina endlini. Uma inja ihlala endlini yangasese, idinga idokodo elifudumele, lingabandakanyi ama-drafts.
Ama-Bullmastiffs adalwa eBrithani. I-Bullmastiff ekuqaleni yayihloselwe ukuvikelwa ngakho-ke ochwepheshe bazama ukuhlakulela kuye isibindi, ukukhuthazela namandla angokwenyama, kepha ngemininingwane enjalo kumele abe nokulinganisela futhi ethembekile ukuze abanikazi bamethembe. I-Bullmastiff nayo ingakwazi ukubhekana nokulandelela phansi nokubambezela abashicileli nabantu abahlomile abangakwazi ukumelana noma ukushiya ushushiso, ngakho le nja ivame ukubizwa ngokuthi "inkosi yamahlathi".
Njengamanje, ama-bullmastiffs awakhulumi ukwenza amakhono abo okusebenza okuthungatha nokulibala izigebengu, kodwa kaningi njengogada, umlondolozi nomngane. Izinja zalolu hlobo ziyakwazi ukubonisa izimfanelo zabo ezizuzwa njengefa, ezizuze njengefa.
Indlela yokunakekela i-aquarium fish neons
Ukuhamba nenja: amathiphu namasu
I-Pyroplasmosis ezinja: ukwelashwa
Indlela yokugqoka kahle i-harness ngenja
Izifo ezithathelwanayo ezifuywayo
Ukwelashwa kwe-ozone, ukwelashwa kwe-ozone term
Amasiko wezocansi emazweni ahlukene
Ukudla okuhle futhi okuqala ngo-Mashi 8
Ukuxhumana nolimi lwezilwane
Indlela yokuthola isisindo futhi uphinde ufune ukudla
5 izinkolelo mayelana nobuhle
Indlela yokulondoloza ubuhlobo obuhle emndenini?
UZemfira wabika ngeholide lokugcina
Ukwelashwa kwezindlela zabantu abangenabantwana abangenasifo
Isaladi yamaGreki ene-pasta